Ingxaki yesikhumba semaski ebuso
Kule nqaku siza kukuxelela ngesikhumba sengxaki ebusweni, kwaye iziphi iimaski ziya kusebenza ngempumelelo kuwe.
Ngengxaki yesikhumba ebusweni, ubomvu, izibilini, ukucaphuka kuhlale kubonakala ngokucacileyo kwaye kunzima ukufihla. Nangona kunjalo, unokunyanga ingxaki yesikhumba ngokunyamekela. Ukuba unesifo sengxaki ebusweni, kufuneka ususe ukungcola kwaye uchithe yonke imihla. Kwikhumba leengxaki kukho izibonda ezibanzi, ezi zibonda zivutha kwaye zivaliwe ngeentlawulo ezinamafutha. Uninzi lwamaxesha kwimeko yengxaki yesikhumba, loo ndawo yesikhumba njengamahlathi, impumlo kunye nebunzi.
Ubunqabileyo besikhumba sengxaki kukugqithiseleyo kokukhutshwa komzimba. Kwaye ukususa i-plaque enjalo kunye nokuhlamba okulula kubuso akunakwenzeka. Kwakhona, ukuhlamba ngamanzi atshisayo akunakuyicombulula ingxaki, kodwa ngokuchaseneyo kukuvumela ukukhululwa okukhulu kwe-sebum kwaye kwandise iipolisi.
Kufuneka ukwazi ukuba ngokuphindaphindiweyo amaxesha angama-2 ngosuku awukwazi ukuhlamba ikhumba lakho. Ukususa amanqamlezo ekhumba, uholele ekuveleni kwayo kwaye ukwanako ukwenza kube nzima nakakhulu.
Xa uhlambele ubuso bakho, kufuneka uwutyebhele nge ithawula, kodwa ungayicongi. Ngaphambi kokusebenzisa izimonyo, linda imizuzu eyi-10 ukuze ubuso bakho bome.
Abantu abaneenkcenkceshe zobuso beengxaki akufanele bafake izibilini ngokwabo, le nkqubo ibhetele kakhulu kwi-cosmetologists. Ukucocekisa isikhumba sengxaki ebusweni, sebenzisa izixhobo zokulungisa izihlandlo, kanye kanye okanye kabini ngeveki.
Ngoku makhe sithethe ngamaski ebusweni afanelwe uhlobo lwakho lolusu. Uya kulungela kakuhle imaski eyenziwe ngobumba. Ubamba ngokugqibeleleyo ukukhutshwa komzimba kunye nokuvula ii-pores. Ukuba awunalo i-mask yobumba, unokwenza umququ we-oatmeal, ayiyi kuba yimbi.
Kwakhona, unokwenza ulungiselele imaski yolunye uhlobo lwesikhumba kwimveliso yobisi. Basebenzise ebusweni bakho imizuzu emihlanu ngaphambi kokuhlamba ubuso bakho. Unokwenza ulungiselele imaski ebusweni bakho kwipisipuni yeviniga okanye kwi-pinki enye ye-citric acid nganye ilitha yamanzi. Yongeza le mveliso ekhutshwe emanzini ngaphambi kokuba uhlambe, kwaye ngoko unako ukunciphisa amanqatha ebusweni.
Abantu abanengxaki yesikhumba abakwazi ukutshisa ilanga elangeni baze batyelele i-solarium. Ukushisa kwamanzi okuhlamba kufuneka kufane nokushisa komzimba.
Ukwenza rhoqo iimaski kunye nokunyamekela ulusu lweengxaki, ngokulandela imithetho yokunyamekela, unokuphucula kakhulu imeko yesikhumba sakho.
Ukunyamekela kwesikhumba esiqhelekileyo ebusweni
Phakamisa ngaphandle kwe-scalpel
Ukunyamekela ubuso kunye nomzimba entwasahlobo
Ukuba umntu ngokukhawuleza wayeka ukuthetha
Isiphumo esihle sengqele emzimbeni
Izizathu zokuqhawula umtshato wokuqala wabatshatileyo
Fundisa umntwana ophumelelayo
UVgeni Feofilaktov wayekrokrelwa ngokuqeshisa iziqu
U-Angina kumntwana: unyango
Yintoni enokuyenza ukuba iinyanga zonke ziphuma kwiholide: Iingcebiso zonyango, indlela yokuyeka ukuya kwimihla nendlela yokwenza ukhululekile ngexesha lokuphumla
I-sandwiches ze-BBQ kunye nengulube kunye neklabishi
Izifundo ezingu-7 - kwaye unomtsalane. Icandelo 2
Uhamba kunye nekottage shiese kunye neerinki